Xiisadda dalka Itoobiya oo wali sal dhigin iyo dhimashada oo mareysa 67 qof. – Xeernews24
Xiisadda dalka Itoobiya oo wali sal dhigin iyo dhimashada oo mareysa 67 qof.
Waxaa Gobolka Oromadda ee dalka Itoobiya lagu dilay toddobkaan gudihiisa illaa 67 qof, intii ay socdeen banaabax looga soo horjeedo Ra’isul wasaaraha dalkaas oo ka dhacay caasimadda Addis Ababa iyo Magaalooyin kale oo ka tirsan kililka Oromadda.
Saraakiil ka tirsan booliiska oo u waramay Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijiyay in dabadabaxyada rabshadaha watay ee maalmahaan ka socday dhulka Oramadda ay ku naf waayeen ilaa 67 ruux, iyadoo ay rabshadaahii maanta madaxa la galeen maalintii seddaxaad.
Sidoo kale Booliska ayaa sheegay in 5 laga dilay, waxayna intaas ku dareen 13 kamid ah dadka la dilay in lagu dilay rasaas halka inta kalana ay ku dhinteen rabshadaha iyo dhagxaantii la isku tuurayey.
Booliska ayaa gacanta ku dhigay 68-qof oo lala xidhiidhinaayo kicinta shaqaaqoyinkii ka dhacay caasimadda is maamulka Oromadda ee Adama, duqa magaalada Adama oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in dadka la qabtay looga shakisan yahay dilalkii,boobkii iyo goobihii cibaadada ee lagubay.
Jawar Maxamed oo ah ninka sababta u ahaa in ay qarxaan rabshadaha hadheeyay deegaanada is maamulka Oramiya ee dalka Itoobiya oo la hadlay Reuters waxa uu eedeyn u jeediyay Ra’iisul Wasaaraha dalka Abiy Ahmed oo uu ku tilmaamay kaligii taliye cusub.
Jawar wuxuu ku soo caan baxay khudbadaha iyo bandhigyada uu kaga hadlo siyaasadda dalka Itoobiya, isaga oo weliba qurbajoogta Oromadda ee Mareykanka ku nool hormuud u ahaa.
Gaar ahaanna Jawar waxaa si gaar ah uu ugu soo caan baxay jidgooyooyinki maalmaha socday ee lagu sameeyey jidadka soo gala caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa, ugu dambeyntina sababay inuu ra’isal wasaarihi hore ee Itoobiya Haile Mariam Desalegn uu iscasilo xilkana uu la wareego Dr Abiy Axmed oo qowmiyadda Oromadda u dhashay hadana ay isku kacsan yihin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/qoti.jpg 816 612 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-26 17:09:182019-10-26 17:09:18Xiisadda dalka Itoobiya oo wali sal dhigin iyo dhimashada oo mareysa 67 qof.
Xogta Dahsoon xidhiidhka Ruushka iyo Afrika iyo Sacuudiga iyo Xuutiyiinta DawladaMaraykanka Oo Ku faraxsan In ay Dishay Hogaamiyihii Ururka Daacish.